Soomaali Burcad badeed ah oo lagu maxkamadeynayo Jaziirada Seychelles – Somali Top News
Soomaali Burcad badeed ah oo lagu maxkamadeynayo Jaziirada Seychelles
Maxkamada Sare ee Jaziirada Seychelles ayaa la soo taagay 5 Nin oo Soomaali ah,kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira burcad badeednimo.
Booliska dalkaas ayaa waxaa ay sheegeen in Shantaas Ruux ee Soomaalida ah ay Bishii Apriil ee sanadkaan ay kala soo wareegeen Ciidamada Midowga Yurub ee la-dagaalama Burcad Baddeeda Soomaalida.
29-kii Bishaan oo ku beegan Isniintii la soo dhaafay ayaa raggaas Maxkamad lagu soo taagay dalka Seychelles,hayeeshee Garsoorayaasha Maxkamada ay dalbadeen in Xabsiga lagu sii haayo ilaa 7-da Bisha June ee Sanadkaan si baaris dheer loogu sameeyo.
Booliska ma shaacin Magacyada Shanta ruux ee Soomalida ah ee loo heysto falka Burcad Baddeednimada ah,balse mid ka mid ah shaqsiyaadkaas la tuhmay ayaa Soomaaliya dib loogu soo celiyay Bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ee 2018­kii.
Jaziirada Seychelles ayaa horay waxaa loogu xiray Soomaali farabadan oo lagu eedeeyay burcad Baddeednimo halka kuwo kale Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kasoo deysay Xabsiyada dalkaas,iyada oo lagu soo celiyay Soomaaliya.
Ciidamada la-dagaalanka Burcad Baddeeda Soomaalia ee ku sugan Xeebaha Soomaaliya ayaa inta badan waxaa ay sameeyaan howlgallo ay uga hortagayaan Burcad Baddeeda,waxaana markii ay qabtaan ay ku wareejiyaan wadamada qaar ee la weeraro Maraakiibtooda Ganacsi.
← Taliska Booliska oo soo bandhigay shaqsiyaad isugu jira Shabaab iyo Burcad oo gacanta lagu dhigay
Dagaal xoogan oo Al shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray dagmada Afmadoow →
Puntland oo digniin u dirtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka dhisan
Banaabax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Al shabaab iyo Daacish oo isku hor fadhiya magaalo katirsan Jubbada Dhexe